Jaangooynta ugu sarreeya 6da ugu sarreeya ee macluumaadka shabakadda internetka
Shabakadda Macluumaadka Webka waa mid ka mid ah qalabyada ugu saameynta leh. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xoqo macluumaadka laga helo goobaha warbaahinta bulshada ee kala duwan, goobaha firfircoon, dekadaha safarka, bogagga dukaamada iyo blogyada gaarka loo leeyahay.
Waxaad isticmaali kartaa Data Extractor (Data Extractor) si aad u soo qaadatid iyo xogta jarista URL-yada gaarka ah, tagska meta, koobabka meta iyo sharaxaadda. Xitaa waad qabanqaabin kartaa xogtaada ku saleysan dabo-gaaban iyo ereyada dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee leh qalabkan - debt settlement by attorneys. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee macluumaadka soo saarka Webka ayaa lagala hadlay hoos.
1. Qalabka oo dhan:
Shabakadda Macluumaadka Shabakada waa mid wareegsan oo sameeya hawlo kala duwan isla waqti isku mid ah. Ma aha oo kaliya warshad dhamaystiran laakiin sidoo kale tarjumaan awood leh. Iyada oo la adeegsanayo Data Extractor, waxaad si habboon u daabici kartaa waxyaabaha la xoqay boggaaga ama aad ku raadin kartaa bogagga shabakada si aad uhesho qiimeynta mashiinka raadinta. Adeeggani wuxuu sidoo kale ka saarayaa macluumaadka cinwaanada kala duwan ee emailka, lambarrada telefoonka, iyo lambarrada fakska, oo ku siinaya natiijooyin sax ah iyo waqtigoodii.
2. Asturnaanta iyo Amniga:
Si ka duwan sida kuwa kale ee caadiga ah waraaqaha xogta , Bixiyaha Macluumaadka Webku wuxuu hubinayaa ilaalintaada iyo badbaadintaada internetka. Marka xogta la xoqdo, softwarekani wuxuu u keydiyaa keydka macluumaadka oo wuxuu kuu fududeynayaa inaad faylasha faylashaada ku dhejiso. Qof kasta waligaa marnaba ma heli doono waxyaabaha la xoqay. Xaqiiqdii, waxaad ka ilaalin kartaa faylashaada jilicsan adiga oo isticmaalaya sir ah.
3. Ilaalinta spam dhammeystiran:
Websaytka Data Extractor wuxuu kaa ilaaliyaa xogtaada xagasha xun iyo spam. Waxaa ugu fiican ee loo yaqaan interface interface-saaxiibtinimo waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku hesho macluumaad sax ah oo sax ah oo kaliya. Adeeggani, uma baahnid inaad ka walwasho tayada. Dhamaan URL-yada waxaa lagu shaqeeyaa xog qarsoodi ah waxaana macluumaadka lagu kaydiyaa xogta shakhsiyeed. Waxaa intaa dheer, qalabkan wuxuu bixiyaa faylasha xogta, filtarrada qoraalka ah, iyo filtarrada domain. Waxay noo ogolaanaysaa dib-u-celin-celin isticmaal-celin.
4. Macluumaadka webka ee weyn ee shirkadaha:
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee aan wajahayo waa tayada iyo saxnimada content. Ma daabicin karno maqaalo leh hingaad badan ama qalad naxwe ahaan. Macmiilka Macluumaadka Webku wuxuu hagaajinayaa dhammaan khaladaadka waaweyn iyo kuwa yaryar ee ku jira mawduuceena internetka si toos ah. Waxaa intaa dheer, codsigaan wuxuu xareeyaa tiro badan oo goobo ah waxayna ku haboon tahay shirkadaha.
5. Noocyo kala duwan ayaa la heli karaa:
Waad heli kartaa xoriyada bilaashka ah iyo lacagaha isla markaa. Laga bilaabo bilawga hawlaha, freelancers iyo webmaster, Webka Extractor waa bedel wanaagsan oo lagu soo dejiyo. io. Ganacsi dhexdhexaad ah iyo kuwo ballaadhan, ayaa la heli karaa. Barnaamijkani ma aha mid aad u qiimo badan oo dhanna wuu furan yahay dhammaan fursadaha xiisaha leh iyo sifooyinka aad adiga. Waxay isticmaashaa tiknoolajiyada mashiinka mashiinka ah iyo farsamooyinka muuqaalka muuqaalka si loogu beegsado kumanaan goobood. Iyada oo la adeegsanayo Data Extractor, waxaad abuuri kartaa wakiilo kala-saaris kala duwan oo ku saabsan arrimo ilbidhiqsi ah mana u baahnid xirfad wax barashada.
6. Navigare Site ah:
Shabakadda Data Extractor waxay ku socotaa iyada oo la adeegsanayo bogag internet oo kala duwan oo ku siinaya macluumaadka ugu sarreeya marnaba. Waa inaad soo bandhigtaa xogta oo u ogolaataa in la ogaado xiriirka gudaha iyo dibadda. Software wuxuu ururin doonaa oo abaabuli doonaa xogta. Waxaad heli kartaa natiijooyin la doonayo laba illaa saddex daqiiqo. Shabakadda Data Extractor ayaa sheegatay in ay xoqanayso ilaa 1 milyan oo bog internet ah illaa hadda.